बेलखानेको छोरो भन्थे : शिक्षाविद प्रा.डा. कोइराला | Educationpati.com
बेलखानेको छोरो भन्थे : शिक्षाविद प्रा.डा. कोइराला
२०७३ बैशाख १० गते ०८:५२मा प्रकाशित
प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला शिक्षा अभियन्ताका रुपमा चिनिन्छन । वि.स २००९ भदौ ५ गते आमा प्रेमकुमारी कोइराला र वुवा साध्य प्रसाद कोइरालाका सिन्धुलीको कुशेश्वर गाविस वडा नं.२ दुम्जामा जन्मिएका विद्यानाथ नेपालको शिक्षा कसरी सुर्धान सकिन्छ भन्नेमा लागेका छन । कोइराला शिक्षकले राम्रोसंग पढाउने र विद्यार्थीले पढे भने नेपालको शिक्षा अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुने दावी गर्छन ।
उनी यसैलाई सुधार गर्नका लागि विगत .५ बर्षदेखि शिक्षक चाहेमा गर्न सक्छन भन्ने अभियानमा समेत चलाएका छन् । उनी अभियान मार्फत शिक्षकलाई व्यहारिक शिक्षण सीप सिकाउन एक ठाउमा भेला गरि विद्यार्थीलाई पढाउने व्यहारिक शिक्षण सीपबारे जानकारी गराउने गर्दछन । अहिले उनी २५ बढी जिल्लामा शिक्षकलाई यस्तै व्यहारिक सीप सिकाइसकेका छन ।
विद्यालय तहमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाउन खोजे राम्रो पढाए शिक्षा व्यवहारिक हुने उनी बताउछन । तर शिक्षक राम्रोसँग नपढाउने र विद्यार्थीले नपढदिनाले शिक्षाको स्तर खस्कन गएको उनी तर्क गर्छन । उनले अहिलेकै पाठ्क्रममा नै नेपालको शिक्षण सुधार सके व्यवहारिक बनाउन सकिने दाबी गर्छन । शिक्षक पढाउने र विद्यार्थीको पढ्ने सीप नभएका कारण शिक्षा विग्रदै गएको दोष उनी लगाउछन । र भन्छन– ‘यहाको शिक्षा राम्रो हुदाहुदै पनि शिक्षकले पढाउन नजान्ने र विद्यार्थी पढ्ने रुची दिदैनन । जसले गर्दा विद्यार्थी नपढेर पास गर्ने परम्परा रहेको छ ।’
कोइराला नेपालको शिक्षा प्रणाली ठीक नहुनुमा राजनीतिक दलका मुख्य दोषी भएको आरोप लगाउछन । पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली गलत भएर यहाँको शिक्षण प्रणाली दोष लगाउने काम गलत रहेको उनको बुझाई रहेको छ । उनी भन्छन–‘तर त्यसो होइन पाठ्यक्रमलाई दोष देखाउने एउटा कुरा हो तर ती त निर्जिव हुन सुर्धान सकिन्छ । तर त्यही सुधार गर्न नचाहने राजनीतिक दल शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउने नसक्ने मुख्य दोषी हुन् ।’
उनी विद्यार्थीलाई पढेर जागिर नभई बृद्धि खर्च गर्न आग्रह गर्दछन । पढेर जागिर पाइएन भनेर भन्दा पढेको विद्यार्थीले जागिर भन्दा पनि बृद्धि खर्च कम गरेर कमाउने हो नकि जागिर उनी भन्छन पढेर जागिर खोज्ने होइन । आफै काम गर्ने हो । र अरुलाई काम दिने हो । तर नेपालमा पढेर नै जागिर खाने मानसिकता भएको कारण धेरै पढेका मान्छे वेरोजगार भएको उनको भनाइ रहेको छ ।
उनको नजरमा नेपालका शिक्षकलाई सन्तुष्टिको रुपमा रहेका छैनन । नेपालमा शिक्षकको पढाउने सीपका कारण शिक्षकको स्तर खस्केको बताउछन । पहिलेका शिक्षकमा पढाउने खुवी रहेको तर अहिले नपढाएर कुनै राजनैतिक दलको विल्लाभिरे पछि नपढाएर तलव खान पाइन्छ भन्ने मानसिकताका शिक्षक भएको कारणले शिक्षण व्यवहारिक नभएको उनको भनाई रहेको छ ।
नेपालमा पढाउने शिक्षक थोरै भएका बताउने कोइरालाले शिक्षकलाई बास्तविक शिक्षक बनाउन नसकेको गुनासो गर्छन । ‘शिक्षकलाई शिक्षक बनाउन सकेनौ । भएपनि थोरै छन’उनी तर्क गर्छन ‘तर नपढाउने शिक्षक धेरै रहेका छन ।’
नेपालको शिक्षा सुर्धान गर्नमा पहिले शिक्षकलाई सुर्धानुपर्ने बताउने कोइराला त्रिवि शिक्षा संकायको एमफिल संयोजकको रुपमा स्थापना कालदेखि वि.स २०६१ वाट कार्यरत रहेका छन । उनी विहान विद्यार्थीका शोधपत्र थेसीस जस्ता कुराहरु हेर्ने गर्दछन । र दिउसो डिल्लीबजारस्थित त्रिविको एमफिल कार्यलयमा विद्यार्थीहरुलाई पढाउने गर्दछन । भने बाकी समयमा नेपालको शिक्षालाई कसरी सुर्धान सकिन्छ भन्नेमा वित्ने गरेको छ ।
दुई लिपीलाई जोड्दै
सरल स्वभावका कोइराला अर्को नया काम पनि थालनी गरेका छन । उनले दुई भाषाको लिपिलाई एउटैबाट पढन सकिने नया अनुसन्धानमा लागेका छन् । अनुसन्धानबाट उनले एउटा भाषा लिपिबाट अर्को भाषाको लिपि सिकाउने सकिने बताउछन् । एक भाषा पढ्दा अर्को भाषाको लिपिपनि संगै हुनाले एउटा पढदा अर्को लिपि जान्न सकिने उनी बताउछन । ‘उर्दुको लिपिमा अंग्रेजी लिपिपनि हुन्छ । अंग्रेजीमा भएको उर्दुमा पनि हुन्छ’ उनी भन्छन–‘त्यही एक लिपिलाई पढ्दा अर्को लिपि पनि जानिन्छ ।’
३ भाई र ५ बहिनीमा उनी सवभन्दा जेठा कोइराला सानैदेखि पढाईमा तिक्ष्ण रहेका थिए । उनको औपचारिक शिक्षा कुशेश्वरमावि कुशेश्वरवाट भएको हो । तर उनले पहिलो पटक वि.स. २०१४ सालतिर फुपुसँग काठमाडौ आएका वेला अक्षर चिनेका थिए ।
अनि एकै पटकमा कुशेश्वरमाविमा २ कक्षामा भर्ना भएका थिए । कक्षा ५ सम्म त्यति पढाई राम्रो नभएको कोइराला जव कक्षा ५ मा फेल भए अनि पढाईलाई सुधारे । उनी त्यसपछि कक्षामा सधै प्रथम हुन थाले । उनी भन्छन–‘कक्षा ५ मा फेलभएपछि मेरो पढाई राम्रो हुन थाल्यो र सधँै प्रथम भए ।’ तर एसएलसी परीक्षामा द्धितिय श्रेणीमा पास भए ।
घरको आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कोइराला सानैदेखि दुःख गरि पढेका हुन् । उनले स्कुलतहदेखि नै अर्काको घरमा भाडा माझेर स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरे । विद्यालय तहमा पनि आफुभन्दा तल्लो तहमा पढाउने गर्दथे । शिक्षकहरुले उनलाई तल्लो तहमा पढाउन लगाउथे र राती पढ्नको लागि मट्टीतेल दिने गरेको उनी सम्झन्छन ।
अत्यन्तै न्युन आर्थिक स्थिति भएका कोइरालाको परिवारलाई चैत्र र वैशाख खान पुग्दैनथ्यो । घरमा खेतवारी नभएकोले दुई महिना उनको परिवारले केही खाने नभएपछि बेलमात्र खाएर बाच्ने गर्दथ्यो । उनी सम्झन्छन दुई महिना घरमा रहेको अन्नबाली पुग्दैनथ्यो । त्यतिवेला बेलमात्र खाएर हाम्रो परीवार बाच्थ्यो । अनि मलाई बेलखानेको छोरो भन्ने गर्दथे ।’
कोइराला क्यानडाबाट पिएचडी गरेपछि कमाउन थालेका हुन् । अहिले उनको चावहिलमा घर रहेको छ ।
कोइरालाले वि.स २०२५ सालमा एसएलसी परीक्षा पास गरेका हुन । त्यसपछिको शिक्षा उनको काठमाडौँको त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस किर्तिपुरमा भयो । पढाईमा राम्रो भएकोले उच्च शिक्षा उनलाई साइन्स पढ्ने इच्छा हुदाहुदैँ पनि पाएनन् ।
साइन्स पढ्न नपाएपछि कृषि पढ्ने रहर थियो । तर पनि पढ्न पाएनन् । अनि सरकारले शिक्षा पढेपछि पैसा पनि दिने भएकोले उनले शिक्षा बिषय रोजे । त्यतिवेला सरकारले शिक्षा संंकाय पढ्ने विद्यार्थीलाई मासिक ७० रुपिँया दिने गर्दथ्यो । ‘घरमा मलाई राम्रो बिषय पढाउने पैसा थिएन’उनी सम्झन्छन–‘अनि पढेपछि पैसा पनि पाइने भएकोले शिक्षा संकाय रोजेको हूँ ।’
वि.स. ०२७ सालमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह द्धितिय श्रेणाी,वि,स ०२९ सालमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरे । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कोइरालाले तीनबर्ष वि.स २०३० देखि २०३३ सम्म आफु पढेको विद्यालयमा गई पढाउन थाले । स्थानीय मानिसहरुले विद्यालय विग्रन थालेका भन्दै काठमाडौमा पढिरहेका कोइरालालाई विद्यालयको प्राधानाध्यापक समेत बनाइदिएका थिए ।
त्यसपछि उनी पुन काठमाडौ आई आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिए । कोइरालाले वि.स २०३५ सालमा एजुकेशन प्लानिग एण्ड म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरे । त्यही वेला उनको लिला भट्टराईसँग विवाह भयो । उनका छोरा संवेदन कोइराला र छोरी संचिता कोइराला छन् ।
आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कोइराला स्नातकोत्तर पास गरेपछि जागिरको खानेतर्फ लागे । उनले त्रिविले अस्थायी शिक्षक विज्ञापनमा आवेदन दिए र नाम निकाले । अस्थायीमा नाम निकालेका कोइराला पहिले बुटवल बहुमुखी क्याम्पस र त्यसपछि ठाकुरराम क्याम्पस वीरगंजमा अध्यापन गराए । ठाकुरराममा अध्यायन गराउदा गराउँदै उनी स्थायी पनि भए ।
कोइराला त्रिविले शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भएपछि वि.स २०३९ सालमा जागिर खाने काठमाडाँै आए । र उनी त्यही अनुसन्धानकर्ताको रुपमा काम गर्दा सरकारी कोटामा विद्यावारिधी गर्न वि.स २०४९ सालमा क्यानडा गएका थिए । कोइरालाले स्कुलिङ एण्ड दलित अफ नेपालमा विद्याबारिधी गरेका छन । उप अनुसन्धान अधिकृतको रुपम काम गरेका कोइराला पछि उप प्राध्यापक हुदँ वि.स २०५४ सालमा सहप्राध्यापक भए । वि.स २०५० देखि दुई बर्ष उनी स्नातकोत्तरलाई अध्यापन समेत गराएका कोइराला वि.स २०५५ मा प्रोफेसर भएका हुन ।
डेनमार्क,नर्वे,फ्रान्स,अमेरिका,जर्मन,थाइल्याण्ड,इण्डोनेसिया,केन्या,फिलिपिन्स जस्ता १२ देशको भ्रमण गरिसकेका कोइराला नयाँ नयाँ कुराको अनुसन्धान गर्न रुचाउँछन । महेन्द्र विद्या भुषण पुरस्कारबाट सम्मानित उनी त्रिविले प्रदान गर्ने शिक्षा पुरस्कार दुई पटक पाएका छन ।